हिमालयखवर संवाददाता , २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार - अमेरिका- डा. कृष्ण उपाध्यायले नेपालको माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भसँग जोडेर "द घोष्ट इन द हिल्स"(The Ghosts in the Hills) नामक उपन्यास हालसालै प्रकाशित गरेका छन् । उक्त पुस्तकको kindle संस्करण र पुस्तकa...
तारा बराल , २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार - हिजो राती युलेश सिटी काउन्सिलमा टीका पौडेलले चुनाव जितेको समाचारले अमेरिकी नेपाली समुदाय तरङ्गित भयो । करिब चार महिनाको अथक परिश्रम सफल हुँदा चुनावमा खटिएका सबै प्रफुल्ल नहुने कुरै थिएन । एउटा नेपाली ...
बलायर “प्रत्याशी” , २० जेष्ठ २०७८, बिहीबार - एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको सहयोगी निकायले नयाँ कार्य समिति पाएको छ । विगतको भन्दा फरकरुपमा यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा हालको कार्यसमिति (म ...
डा. मुरली अधिकारी , १४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार - एनआरएन अमेरिकाको चुनाव दैलोमा आइपुगेको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै पुनः यो चुनाव समाज सेवाको लागि दौडादौड, प्रतिस्पर्धा, समय र पैसाको व्यर्थ कर्मको लागि प्रयोगको रुपमा आएको छ । सर्वप्रथम यो चुनाव पूर्व ...
प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र , १३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार - विसं २०२८ साल वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म म डिल्लीराज हाइस्कुल झापामा शिक्षकका रूपमा कार्यरत थिएँ । त्यसबेला मैले झापाबजार जस्तो देखेँ त्यहीअनुरूपको चित्रण गरेको छु । सम्बत् २०२७ साल चैत महिनाको १० गते म ...
बलायर “प्रत्याशी” , १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार - आज भन्दा २५ सय वर्ष अगाडी एउटा बिचार जन्म्यो । जुन विचार पुर्णीमाको चन्द्रमा संगै उदाएको थियो र सदाकोको लागी पूर्णीमाको प्रकाशसंगै रहन सफल भयो । हो ! त्यो बिचार, त्यो दर्शन, त्यो बिज्ञान, जसको जन्म, ज ...
प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र , २ जेष्ठ २०७८, आईतवार - धनकुटा नेपालकै गौरवपूर्ण अतीत भएको ऐतिहासिक स्थल हो । नेपाली इतिहासको कालखण्डमा यसको आफ्नै विशेषता र पहिचान रहिआएको छ । धनकुटाको प्रामाणिक इतिहास भने अठारौँ शताब्दीदेखिको मात्र पाइन्छ । धनकुटाको नामकर ...
हिमालय खबर , २८ बैशाख २०७८, मंगलवार - कोभिड–१९ को जीवाणुले विश्वभरिका देशलाई डस्न थालेको ठ्याक्कै डेढ वर्ष भयो । सन् २०२० को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको भनिएको यो विषाक्त जीवाणुले आजसम्म आइपुग्दा विश्व विचरण गरिसकेको छ । यो आल ...
बलायर “प्रत्याशी” , २३ बैशाख २०७८, बिहीबार - भन्ने गरिन्छ, जीवन संधर्षमय हुन्छ भनेर । संधर्ष कै क्रममा मानवले रोजी-रोटी देखि हरेक दैनिकीका पाटाहरुसंग जुध्दै जीवनका नयाँ बिहानीहरुसंग सामन्जस्यता स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ । आज मानव जीवन माथी समयले ...
हिमालयखवर संवाददाता , १९ बैशाख २०७८, आईतवार - अमेरिका- अमेरिकी जनगणनाको नतिजाले अमेरिकी राजनीतिमापनि प्रभाव पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । जनगणनाको तथ्यांकले अमेरिकी राज्यहरुमा जनसांख्यिक नतिजा पहिले भन्दा धेरै नै फरक देखिएको छ । यसले अमेरिकी राज्यह ...
डा. अविन ओझा , १६ चैत्र २०७७, सोमबार - प्रसंग, विश्वमा जातियता, सम्प्रदायीकता, लिङ्ग, र धर्म आदीका नाममा विभिन्न खाले विभेद, द्वन्द्व, र हिंसा हुँदै आएको छ । यो कति पुरानो छ भन्ने विषयको वहस गर्दा मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै सुरु भएको म ...
सुजन पण्डित , ९ चैत्र २०७७, सोमबार - अचेल एनआरएनए अमेरिकामा चुनाव लागेको छ। अध्यक्षका आकांक्षीदेखि अन्य पदहरुमा समेत उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने होड चलेको छ। प्रमुख पदहरुमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरुको चहलपहल आफ्नो बासस्थानको सहरमा भ ...
हिमालयखवर संवाददाता , ७ चैत्र २०७७, शनिबार - टेक्सस (अमेरिका)- केही लगानी गरौं भनेको कहां गर्ने ठाउंनै पाएको छैन , अमेरिकामा यस्तो भन्ने नेपाली धेरै छन् । कतिले आफुलाई उपयुक्त हुने व्यवसाय किन्न खोज्दा नपाएको गुनासो समेत गर्छन । थुप्रै व्यवसायील ...